RAJOELINA HATRANY NO SAKANA SY OLANA ETO – MyDago.com aime Madagascar
RAJOELINA HATRANY NO SAKANA SY OLANA ETO
Mbola tsy ahitana mangirana hatramin’izao ny vaha olana hivoahan’i Madagasikara amin’ny krizy iainan’ny Malagasy nandritra izay efataona izay, na dia samy miezaka ny mitady ny vahaolana aza ny Sadc sy ny FFKM. Ny FFKM moa dia efa niezaka nampihaona azy efatra mirahalahy teny Ivato farany teo saingy ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy tonga noho ny Notam nataon’ny mpitondra fat. Ny iraky ny Sadc kosa dia anio no voalaza fa ho tonga eto amintsika hitady ny vahaolana farany amin’ny famahana ny krizy. Inona no sakana ? Iza no olana ? Aiza ny vaha olana ? Raha tsiahivina dia nisy ny fifampidinihana teo amin’ireo mpifanandrina izay namoahana fehinkevitra toy ny tany Maputo I, II, Addis Abeba, Pretoria, Sandton, Gaborone , Seychelles I, II, ny fanaovan-tsonia ny tondrozotra teny amin’ny Paon d’or Ivato. Tamin’ireo rehetra ireo dia Ingahy Rajoelina no sakana sy mipetraka ho olana hatrany. Tsy notanterahany izay zavatra nekeny ary tsy nohajaina ny sonia izay nataony. Tsiahivina fa mbola Rajoelina no sakana tamin’ny fampiharana ny satan’I Maputo raha ohatra ka I Mangalaza Eugene avy amin’ny Ankolafy Ratsiraka no tokony notendrena ho lehiben’ny governemanta dia Ingahy Camille Vital Ankolafiny ihany indray no nataon’ny praiminsitra. Ankoatra io dia hevitr’olon-tokana na “unilateralisme” no nanjaka teo amin’ny fitantanana ny tetezamita. Tsy nandray anjara tao ny Ankolafy telo.
Nifanaraka indray tany Seychelles fa tsy hisy hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izy roalahy na ilay antsoina hoe : Ni…Ni… Iaharantsika mahalala ankehitriny fa anisan’ireo kandidà ho filoham-pirenena Ingahy Rajoelina.Mbola izy hatrany olana. Toy izany ihany koa ny voalazan’ny tondrozotra izay efa lasa lalàna mifehy ny tany sy ny fanjakana. Tsy nampihariny amin’ny antsipiriany anefa ny voalaza tao fa izay andininy metimety aminy ihany no notanterahany. Io tondrozotra io anefa no naha filohan’ny tetezamita azy. Modiany fanina ny fampiharana ny andininy faha 16,17,18 indrindra fa ny andininy faha 20, izay milaza fa avoaka avokoa ireo gadra politika rehetra mbola any am-ponja, sokafana daholo ireo radio nakatona nandritra ny efataona, ary miverina tsy misy fepetra ireo sesi-tany politika any ivelany ary anisan’izany ny filoha Ravalomanana Marc. Mbola Rajoelina hatrany no sakana amin’izany. Ny Ankolafin-kery sy ny olom-pirenena tsirairay dia samy resy lahatra fa ny fifidianana no vahaolana hivoahana amin’ny krizy. Efa nofaritan’ny Ceni-T sy ny fikambanana iraisam-pirenena ny datim-pifidianana ka ny 24 Jolay 2013 no hanatontosana izany. Samy nametraka ny antontan-taratasiny teny amin’ny CES avokoa ireo nanam-paniriana ny ho kandidà ho filoham-pirenena. Tamin’ny fametrahan-dRamatoa Lalao Ravalomanana ny antontan-taratasiny dia tsy nahenoana resaka ny fikambanana iraisam-pirenena sy ny teto an-toerana. Nanaiky ny maha kandidà azy ny CES satria heverin’izy ireo fa nahafeno ny fepetra ny tenany. Rehefa nametraka ny antontan-taratasiny taorian’ny fe-potoana feran’ny lalàna Ingahy Rajoelina dia nipetraka ny olana. Mbola Rajoelina hatrany no olana. Nanomboka nanangam-bovona ny sehatra iraisam-pirenena ny amin’ny tsy maintsy hanesorana ny maha kandidà azy telo mianadahy. Rajoelina anefa no tian’izy ireo esorina satria voararan’ny lalàna iraisam-pirenena ao anatin’ny satan’I Cotonou fa tsy mahazo mitondra ny firenena ny mpanongam-panjakana.
Auteur Solo Razafy*Publié le 8 juillet 2013 8 juillet 2013 Catégories Politique
5 réflexions sur « RAJOELINA HATRANY NO SAKANA SY OLANA ETO »
8 juillet 2013 à 20 h 13 min
Rehefa Rajoelina izany no tena loharano maloto misakana, dia tokony ho vitàna izany ny momba azy, tsy misy afa tsy izay sisa.Mitovy aminy parasy kankana tafiditra ao anatiny ny tongotra io rehefa mangididy tonga dia dorana fa tsy avela hangidihidy ao fotsiny.Tsy misy afa tsy izay sisa, ary isika vahoaka no herany.
KA SENDRA IZAY ALAKAOSY LAHY TSY FAKA TARANAKA DIA IZAO NO VOKANY E
SAMIA MIZAKA FA IO TSY IZY IRERY FA IZY FITAOVANA FOTSINY IHANY FA MARO AO E
AZA MISy mitaraina fa isika ihany io eeeeeeeee tsy sasatra ny mpisolelaka @’izany sao maty antoka tsy mahazo ny Nanjarany.
Tsy izany ko no ahafoana ny MPIKOPAKA NY LALITRY DOMELINA f arakaraka n FAHARATSIANY NO HIGANGONGON’IRETO
OLONA izay mba endrasana haniry vao maika mampivandravandra,MAHONENA!!!!!!
9 juillet 2013 à 7 h 29 min
Ingahy Zafy vao tsy ela no niteny hoe ny miaramila no sakana !
Ka iza marina no tena sakana ? Ny vahoaka toa lasa kakana, tsaingoan’ny akoho lava izao fotsiny sisa !
Rehefa tsisy mpanipy taolana intsony ireo miaramila mpamoritra ny vahoaka ireo dia
ho afaka isika,ka samy tompon’andraikitra daholo na ny alika na ny MPANIMPY TAOLANA.
Aoka koa isika tsy hilatsaka @ fandrika toy itony hoe: ohatry ny nahazo olona koa i domelina fa izao no tsarovy
fa raha nahazo olona i Neny dia olona TSY NISY NOFITAHANA TSY NOVIDINA TSY NASIANA MPIHIRA, koa amiko
tsy dia atao MAHAGAGA RAHA MISY FIHETSIKA GAIGY OHATRA ITONY HITA.
Isika mandeha @ fahatsorana sy fitiavana ny tanindrazana fa tsy vidina na fitahana na dontona @ zavamahadomelina
Fantatr’isika tsara fa NOVIDIANA NY OLONA TAO @ ANKOLAFY DADA no nahazahoany olona toy izao dia i RALAISEHANO
GUY SY RUFFINE TSIRANANA namitahana ny vahoaka, ary za mino fa nisy resaka NENY na RAVALOMANANA tao matoa ny
olona tonga akoatra ny voavidy mazava ho azy.
Mitaky asa lehibe izany ry Malagasy tapaka sy namana rehetra aza variana na mivanaka fa FOZA FOZA IHANY izay no nahafoza
azy ireo LAINGA !FITAKA HITOERAN’NY FAHARATSIANA REHETRA.
Tondrozotra ? Poizina ho an’ny Firenena sy ny vahoaka !!!!
Nahazo olona hoe ?? Ankizy 500 no natao circoncision manarapenitra tamin’ny volam-panjakàna ! Ataovy ny kaonty rahatoa ka nisy olona efatra fotsiny isaky ny fianakaviana, nanotrona !
Précédent Article précédent : Manondrana indray i Ruffine sy Guy Maxime ?
Suivant Article suivant : ALIKAin-dRAJOELINA Andry ny Malagasy